MPT Myanmar | Moving Myanmar ForwardHti Tine Htaw mm - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
MPT မှ လေးစားတန်ဖိုးထားရပါသော သုံးစွဲသူများအတွက် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာနည်းလမ်းဖြင့် ပတ်ကေ့ချ်များဝယ်ယူ၍ ကံစမ်းနိုင်တဲ့ အထူးဒေတာဆုမဲများ၊ အလန်းစား ဆုကြီးများစွာပါဝင်သော ထိပေါက် Lucky Drawများကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ။ဒါ့ကြောင့်အခုပဲ ကံစမ်းလိုက်ကြပါစို့။
MPT4U မှာ ထိပေါက် ကစားလိုက်ပါ
MPT’s Hti Pauk Lucky Draws
How Can I participate in this Lucky Draw?
(MPT4U တွင်ငွေဖြည့်ကတ်ဖြင့် ငွေဖြည့်သွင်းခြင်း)
< ၁၀၀၀ကျပ် –
၁၀၀၀ ~ ၁၉၉၉ကျပ် ၁ ကြိမ်
၂၀၀၀ ~ ၂၉၉၉ကျပ် ၂ ကြိမ်
၃၀၀၀ ~ ၃၉၉၉ကျပ် ၃ ကြိမ်
၄၀၀၀ ~ ၄၉၉၉ကျပ် ၄ ကြိမ်
၅၀၀၀ ~ ၅၉၉၉ကျပ် ၅ ကြိမ်
၆၀၀၀ ~ ၆၉၉၉ကျပ် ၆ ကြိမ်
၇၀၀၀ ~ ၇၉၉၉ကျပ် ၇ ကြိမ်
၈၀၀၀ ~ ၈၉၉၉ကျပ် ၈ ကြိမ်
၉၀၀၀ ~ ၉၉၉၉ကျပ် ၉ ကြိမ်
၁၀၀၀၀ ~ ၁၉၉၉၉ကျပ် ၁၀ ကြိမ်
၂၀၀၀၀ ~ ၂၉၉၉၉ကျပ် ၂၀ ကြိမ်
၃၀၀၀၀ ~ ၃၉၉၉၉ကျပ် ၃၀ ကြိမ်
၄၀၀၀၀ ~ ၄၉၉၉၉ကျပ် ၄၀ ကြိမ်
၅၀၀၀၀ ~ ၅၉၉၉၉ကျပ် ၅၀ ကြိမ်
၆၀၀၀၀ ~ ၆၉၉၉၉ကျပ် ၆၀ ကြိမ်
၇၀၀၀၀ ~ ၇၉၉၉၉ကျပ် ၇၀ ကြိမ်
၈၀၀၀၀ ~ ၈၉၉၉၉ကျပ် ၈၀ ကြိမ်
၉၀၀၀၀ ~ ၉၉၉၉၉ကျပ် ၉၀ ကြိမ်
၁၀၀၀၀၀ကျပ် ၁၀၀ ကြိမ်
၁၂~ ၄၀ ကြိမ်
Special Offer ထိပေါက်
-B2B Offerများ၊ MPT Club၏ Offerများ( Pointsများလဲလှယ်ခြင်း)၊အခြား Offerများနှင့် အခြားသော MPT၏ ကမ်းလှမ်းချက်များသည် ပတ်ကေ့ချ်ထိပေါက် နှင့် Special Offer ထိပေါက်တွင် အကျုံးမဝင်ပါ။
1. ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ဆိုတာဘာလဲ?
2. MPT4U မှမဟုတ်ဘဲ အခြားနည်းလမ်းများ (USSD, DMS စသည်တို့) ဖြင့် ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူပါက ထိတိုင်းထော (Htaw B Hti Pauk) အစီအစဉ်မှာဆော့နိုင်ပါသလား?
3. “ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်မှာ ဘယ်သူတွေပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာလဲ?
MPT4U app နောက်ဆုံးဗားရှင်းရယူထားတဲ့ လက်ရှိ Prepaid စနစ် အသုံးပြုနေသော MPT သုံးစွဲသူတိုင်း အစီအစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ပြီး ထောဘီဖုန်းဘေလ်များကို ကံစမ်းရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ CDMA သုံးစွဲသူများ၊ Postpaid စနစ်အသုံးပြုနေသူများ၊ MPT ဝန်ထမ်းနံပါတ်များ၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေခြင်းမရှိသည့် ဝယ်ယူသူများသည် “ ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ကံစမ်းမဲတွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။
4. “ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်ကနေ ဘာတွေကံထူးနိုင်တာလဲ?
ထောဘီဖုန်းဘေလ် အဆပေါင်း ၁၀၀ ထိ ကံထူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
5. ကံထူးထားတဲ့ ထောဘီဖုန်းဘေလ်ကို ဘာတွေအသုံးပြုလို့ရမှာလဲ?
ကံထူးထားသည့် ထောဘီဖုန်းဘေလ်များကို ရရှိထားသည့်သက်တမ်းအလိုက် MPT ဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုခြင်းနှင့် SMS ပို့ခြင်း၊ သုံးသလောက်ပေးအင်တာနက်တို့အတွက် ထောဘီပက်ကေ့ချ်၏နှုန်းထားများအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
6. ဆုတွေကံထူးကြောင်း ဘယ်လိုသိရမှာလဲ?
ကံထူးသူများသည် ဆုများကံထူးကြောင်း စာတိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
7. ကံစမ်းခွင့်က သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိပါသလား။
8. ယခင်က ထောဘီပက်ကေ့ချ်ဝယ်ရင် နယူးထိပေါက်ဂိမ်းမှာ ကံစမ်းခွင့် (၁)ကြိမ် ရရှိပါတယ်။ ယခု နယူးထိပေါက်ဂိမ်းမှာ ကံစမ်းခွင့် (၁)ကြိမ်မတွေ့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။
9. Data Carry Plus ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားပါတယ်။ ယခုကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ကံစမ်းခွင့်မရှိတော့ဘူးလား။
ကံစမ်းခွင့်မရရှိပါ။ ထောဘီနှင့် PUBG ပက်ကေ့ချ်များမှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်ပက်ကေ့ချ်မဆိုဝယ်ယူတိုင်း “နယူးထိပေါက်” ကံစမ်းမဲအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
10. MPT4U Appကိုဘယ်လိုရယူနိုင်ပါသလဲ?
MPT4U Appကို Google Play Storeမှသော်လည်းကောင်း၊ App Storeမှသော်လည်းကောင်း ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ရယူနိုင်သလို လိုတရဝက်ဆိုက်ဒ်မှ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
11. MPT4U Appကိုဘယ်လိုUpgradeလုပ်နိုင်ပါသလဲ?
12. ကံစမ်းမဲကာလက ဘယ်အထိလဲ?
“ထိတိုင်းထော” (Htaw B Hti Pauk) ဂိမ်းအား ယခုလက်ရှိ MPT4Uတွင် ထောဘီပတ်ကေ့ချ်ဝယ်ယူသူများသာ ကစားနိုင်သော်လည်း မေလ ၂၈ရက် မှစ၍ ထပ်မံမကြေညာမီအချိန်အတွင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နည်းလမ်းဖြင့် ပတ်ကေ့ချ်ဝယ်ယူသူများပါကစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။